Archive du 20200430
Fanoherana ny tetikasan’ny Filoha Olona 1 maty, miaramila 1 naratra
Niverina nidina an-dalambe ireo andian’olona manohitra ny fanorenana tsena manara-penitra ao Berary, izay fampanantenan’ny filohan’ny Repoblika teto Ambovombe Androy omaly alarobia 29 aprily.
Antoko HVM “Tsy tokony amidy eny an-tsena ny Covid Organics.”
Mandrara ny fivarotana ny ody antsoina hoe “remède secret” ny andininy faha 110 ao amin’ny lalana 2011-002, hoy ny fampahatsiahivana nataon’ny antoko politika Hery vaovao ho an’i Madagasikara omaly.
Fampihavam-pirenena Fotoanany izao !
Ambetin-dresaky ny filoham-pirenena ny hoe “tsy mora ny fandraisana fanapahan-kevitra”. Efa samy nanao antso tamin` ireo izay tokony hisian` izay fakan-kevitra anefa ireo hery politika hafa.
Zandarimariam-pirenena Nampitandrina ireo mafimafy fanehoan-kevitra
Hahatairana ny an’ireo mpikirakira tambazotran-tserasera omaly nahita ny fanambarana avy amin’ny fiadidiana ny zandarimariam-pirenena mampitandrina ireo olompirenena mafimafy fanehoan-kevitra.
Fanodikodinana vatsy tsinjo Miaramila iray no nidoboka am-ponja
Tohin` ny raharaha fanodinana ny fanampiana avy amin`ny filohan`ny Repoblika teny amin`ny fokontany Ambohimanala Andoharanofotsy.
Miantso vonjy ny rehetra e !
Tsy sanatria fitia te hanakihana sy hitsikera be fahatany, fa mahavalalanina ihany ny mandinika ny serasera ampiasain’ny fanjakana amin’izao raharaha coronavirus izao.
Taxi-brousse miazo an’Itasy Hosaziana izay tratra mampiakatra saran-dalana
Hosaziana ireo taxi-brousse manararaotra tratra mampiakatra saran-dalana miazo ny Faritra Itasy
Antananarivo sy ny manodidina 15 %n'ireo Taxibe sisa no miasa
Ny 15 %-n’ireo mpitatitra eto Antananarivo renivohitra sy ny manodidina ihany sisa amin’izao no miasa raha araka ny fanadihadiana natao.
Fahasalamana, toakarena, sosialy Nanome tohana 20,8 tapitrisa dolara ny ONU
Mampitombo hatrany ireo tohana sy ezaka hoenti-manampy an’i Madagasikara hiatrehana ny covid-19 ny Firenena Mikambana [ONU]. Nanolotra 20 858 952 dolara izy ireo ny talata 28 aprily teo.
Sambava Mpamboly lavanila iray nisy namono
Mpamboly lavanila iray monina ao amin'ny Fokontany Ambolomadinika, kaominina Nosiarina any amin’ny distrikan’i Sambava no nisy namono tamin’ny fomba mahatsiravina ny alahady lasa teo.
Ambohimanambola Tokantrano 1220 no notolorana Vatsy Tsinjo
Tao anatin’izay nampiharana ny hamehana ara-pahasalamana teto amintsika izay ka nanatanterahana ny fijanonana an-trano hoan’ny rehetra dia nanambara ny ben’ny tanànan’ity kaominina ambanivohitra Ambohimanambola ity,
Sehatra Lavanila Nahazo vatsy 3 tapitrisa dolara avy amin'ny USAID
Misy ny fiaraha-miombon’antoka amin’i firenena Malagasy sy ny fanjakana amerikana eo amin’ny sehatry ny lavanila.
Olona narary teny amoron-dàlana Tsy norarahian’ny 913 sy ny zandary…
Nisehoana tranga nampiahiahy teny Ampanotokana omaly. Araka ny fitantarana, dia nisy olona nandeha tongotra hita reraka be.
Orinasa afaka haba eny Andraharo 1000 indray no very asa
Mpiasa miisa 1000 indray no very asa teny amina orinasa afaka haba iray teny Andraharo.Efa ho iray volana sy tapany no tsy niodina ny orinasa;
Fitsarana ireo ady madio Hanomboka ny alatsinainy 4 mey
Hitohy ny manomboka ny alatsinainy 4 mey ny raharaham-pitsarana eny Anosy. Ireo didim-pitsarana tokony nivoaka tao anatin’ny fihibohana ihany anefa no handeha.
Ambaniala Itaosy Mpianatra iray nahiana ho voan’ny coronavirus
Tovovavy mpianatra iray, manovo fahalalana amina sekoly tsy miankina iray eny Ambaniala Itaosy, distrikan’Antananarivo Atsimondrano omaly no nahiahiana ho lasibatry ny tsimok’aretina coronavirus.
Kaominina Ambohimanambola Nisy 7 tratra tsy nitondra arotava
Raha nahatratra 20 ireo tratra tsy nitondra arotava teny amin’ny renivohitry ny